Ny nanasitranana ilay boka
Naseho ny : 12 oktobra 2020
Alatsinainy 12 ôktôbra 2020 — Jean Beyzym, Olontsambatra — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 40-45 — Ny aretintsika no nentin'i Kristy, ary ny fahoriantsika no nivesarany.
Asao ho aty amin’ny fampakaram-bady...
Naseho ny : 11 oktobra 2020
Alahady 11 ôktôbra 2020 — Alahady faha-28 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 22, 1-14 — Ny teninao, ry Tompo no fahamarinana ; ankamasino amin’ny fahamarinana izahay.
... sambatra izay mihaino ny tenin’Andriamanitra
Naseho ny : 10 oktobra 2020
Sabotsy 10 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-27 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 11, 27-28 — Omeo fahalalana aho, ry Tompo, hitandremako ny lalanao ary hanarahako azy amin’ny foko tontolo.
Raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony...
Naseho ny : 9 oktobra 2020
Zoma 09 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-27 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 11, 15-26 — I Jesoa Kristy Mpamonjy antsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana tamin’ny Evanjely.
Pejy 13 amin'ny 90